धन्तेरसमा सून किन्नु किन शुभ मनिन्छ ? - IAUA
धन्तेरसमा सून किन्नु किन शुभ मनिन्छ ?
ramkrishna October 19, 2017	धन्तेरसमा सून किन्नु किन शुभ मनिन्छ ?
दिपावलि हाम्रो देशको दोश्रो महन पर्वको रुपम मनाउने गरिन्छ।नेपालिहरुले दिपावलिलाइ तिहर पनि भन्ने गरेका छन्। तिहार एक प्रमुख हिन्दु उत्सव मध्ये एक हो जुन हरेक वर्ष अक्टोबर नोभेम्बर मा शुरु हुन्छ। यो उज्यालोको यो महोत्सव हो जसले लक्ष्मी पूजा, धनको देवीको उपासनालाई क्रमशः काग, कुकुर र गाइको पूजा गर्दछ। अन्तिम दिनमा दिदिले भाइ हरुलाइ पुजा र टका लगाई मनाईन्छ।
यस अक्टोबर/ कार्तिकमा दिपावलि परेको छ। नेपालि समाजमा धन्तेरसको महत्व धेरै नै छ। जसमा सुनको थुप्रै महत्व छ। ‘धन’ भनेको अर्थ र ‘तेरस’ को अर्थ हो हिन्दू कैलेंडर को अनुसार 13 औं दिन। डावनटरस दिवाली को समयमा लक्ष्मी पूजा को दिन या दुई पहिले सामान्यतया हुन्छ। यो ठूलो रूपमा मानिन्छ कि धनगढी देवी लक्ष्मी आफ्नो भक्तजनहरूको घरमा गएर उनीहरूको इच्छा पूरा गर्छन्। यसले व्यापार समुदायको लागि यस महत्त्वपूर्ण महत्वको कारण यस दिनको बहुमूल्य खरिदहरूको कारणले गर्दा। साथै, भगवान कुबरा, सम्पत्ति र सम्पत्ति को भगवान पनि यस दिनमा उपासना गरिन्छ।
किंवदंती छ कि एक पल्ट राजा हिमा को 16 वर्षीय पुत्र को एक समस्या मा थियो किनभने उनको कुंडली आफ्नो विवाह को चौथा दिन साँप-काट संग मृत्यु को भविष्यवाणी गरे। त्यसोभए, धेरै दिन मा, उनको नव-विवाहित पत्नीले उनलाई सुत्न अनुमति दिएनन्। उनले सबै गहनाहरू र सुनको कक्षको प्रवेशमा ढोकामा धेरै सुन र चाँदीको सिक्का राखे र सबै स्थानमा बत्ती बत्ती राख्थे।
त्यसपछि उनले तिनका कथाहरू वर्णन गर्न थाले र आफ्नो पति जागिर राख्न गीत गाए। अर्को दिन, जब यम, मृत्यु को देवता, एक सांप को चीज मा राजकुमार को ढोका मा आए, उनको आँखा लैंप र गहने को प्रतिभा द्वारा अंधेरा थिए। यम राजकुमारी को कक्ष मा प्रवेश नहीं गरेर सके, त्यसैले उनले सुन सिक्का को ढेर को माथि चढे र वहां रात को कहानियां र गीतहरु सुन दिए।तथापि, बिहानै, उनी चुपचाप गए। यसरी, जवान राजकुमारलाई मृत्युको चिसोबाट बचाइयो उनीहरूको नयाँ दुल्हनको चालाकताबाट, र दिनहानरस को रूपमा मनाईयो।
अर्को दिन नारक चटर्द्धशी भनिन्छ। चूंकि दिवाली को पूर्व रात को यो चूंकि ‘छत्तीई दीवाली’ भनिन्छ। त्यहाँ एक अन्य किंवदंती हो जुन समय र पछि देवता र शैतानले ‘अमृता’ (अमृता मर्थनको समयमा) को समुद्रलाई पराजित गर्यो, तब उस समय धनभन्तरी (देवता चिकित्सक) – यो शुभ दिन दिनको चिसो लाग्न थाल्यो)।
सून र नयाँ भान्सा खरीद
हिन्दु धर्मावलि अनुशार यदि तपाईं धननारासमा सुन, चाँदी वा नयाँ भाड़आहरू किन्ने गर्नुहुन्छ त्यसपछि परिवारमा राम्रो भाग्य ल्याउनुहुन्छ। साथै, त्यस्ता उत्सवको लागि नयाँ लुगा किन्नको लागी यो एक अनुकूल अभ्यास हो जहाँ मान्छेहरु को जातीय राम्रो मा ड्रेस अप गर्न र मा मा लक्ष्मी पूजा गर्न तयार हुनुहुन्छ। लक्ष्मी पूजाको राति जबमाटोको दियोहरु लाई दुष्ट आत्माहरु को छायालाई भगाउनको लागि बाल्ने गरिएको छ। सम्पूर्ण रात देवी लक्ष्मीको प्रशंसामा गायन भक्ति भजनहरु भरिएको छ। भक्तहरूले आफ्नो परिवारसँग बस्छन् र दिनहुँ भगवान गणेश र देवी लक्ष्मीलाई प्रार्थना गर्छन् जहाँ मिठाई वा शुद्धी को रूप मा प्रसाद देवता को लागि प्रस्तावित गरिन्छ। पछि यसलाई एक-अर्का बीच वितरण गरिदिन्छ।
Previous Previous post: ३० मिनेटको पैदल यात्राले प्रारम्भिक मृत्युलाई रोक्न सक्छ
Next Next post: नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो समस्या ‘तनाव’, यसका कारण लागि रहेछ यस्ता रोगहरु